၂၀၁၈ ခုနှစ်တရားစခန်း သတင်းနှင့် အလှူရှင်စာရင်း
နဝမအကြိမ်မြောက် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် ဝိပဿနာ (၉) ရက် တရားစခန်း (စင်္ကာပူ) ၂၀၁၈
နေ့ရက် ။ ။ ၀၈-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၁၆-၁၂-၂၀၁၈ အထိ
နေရာ ။ ။Camp Challenge 8 Admiralty Rd E, Singapore 759991
လျှောက်လွှာပိတ်ရက် ။ ။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ (သောကြာနေ့)
မထက်ထက်နိုင် (81611435), မဖြူစင်ကျော်(90076620) သို့ဆက်သွယ် အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
(ဃ) ဆရာတော် ဦးဉာဏ
၃) ဆရာတော်တပါးအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်အလှူ
၆) ဆရာတော်များ၊ ယောဂီနေထိုင်ရန် တရားအားထုတ်ရန်ခန်းမအလှူ စုစုပေါင်း တရက်စာ- S$ ၃၃၀၀
၁) ဆရာတော်များအဆောင် တရက် S$ ၂၀၀
၂) တရားအားထုတ်ရန်ခန်းမ တရက် S$ ၁၂၀၀
၃) ယောဂီဆောင် ၁ တရက် S$ ၅၀၀
၄) ယောဂီဆောင် ၂ တရက် S$ ၃၅၀
၅) ယောဂီဆောင် ၃ တရက် S$ ၃၅၀
၆) ယောဂီဆောင် ၄ တရက် S$ ၃၅၀
၇) ယောဂီဆောင် ၅ တရက် S$ ၃၅၀
(+95 9770731716 -Viber) pcchocholay@gmail.com
ဦးမြင့်ဦး + ဒေါ်သိန်းဌေး သမီး မသင်းဂျူလိုင် မိသားစု
ကိုသန့်ဇင်ထွန်း + မခိုင်ဇင်ထွေး မိသားစု
ဦးချမ်းမင်း+ဒေါ်မိမိအောင် သား ရှင်းသန့်ညီ မိသားစု
ဦးဘသန်း + ဒေါ်ခင်မိမိ မိသားစု
10 ဦးမြင့်ဆွေ + ဒေါ်ယဉ်ယဉ်သိန်း ( သမီး Ma Sandra Low) မိသားစု
11 ကိုသိန်းကျော်+မဖြူဖြူမာ မိသားစု
14 ကိုဝင်းနိုင် + မစွဲ့လန်းခိုင်
15 ငြိမ်းတေဇ နဲ့ ခင်သန္တာ သားသျှားထက်ဝန်း
18 မမေသွယ်ခင် မွေးနေ့အလှူ
19 ဦးကျော်ဆန်းမြင့်+ ဒေါ်ကြင်စိန် သမီးနန္ဒာလင်းယုဝေ မိသားစု
21 မျိုးနီနီကျော်, ဖြူပြာရွှေကိုး, ခင်ချိုလွင်, အိအိဖြိုး, အေးမြတ်သူ, ယဉ်ယဉ်မြတ်, ထိုက်သဉ္ဇာဝင်း, လှယမင်,း မျိုးဟန်စုကျော်, ခိုင်ကျော့ကျော့ဇင်
22 ကိုမြင့်ကို၊ မတင်တင်နိုင် သား သန့်လင်းထက်၊ဖြိုးသော်ခန့် မိသားစု
23 ကိုဇော်လင်းထိုက်+မခိုင်မွန်အောင် မိသားစု
24 ကိုစိုးစိုးစံ၊ မတင်တင်ခိုင် မိသားစု
25 ဦးခင်မောင်+ဒေါ်လှယဉ် မိသားစု
26 ဦးဟုတ်ကြိုင်+ဒေါ်တိုးတိုးခိုင် မိသားစု
27 ကိုအောင်ကျော်မြင့်+မယဉ်မင်းသွယ် မိသားစု
28 မိခင် ဒေါ်ခင်အေး အား အမှူးထား၍ မသင်းသင်းထွေး နှင့် မောင်နှမ မိသားစု
29 ကိုနော်အောင်၊ မရည်မွန်၊ သားလေး ဒေါမနစ်ကြယ်စင် မိသားစု
30 ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးသိမ်းမြင့်နှင့်မိခင်ဒေါ်ချို တို့အားရည်စူး၍ ကိုမြစိုး+ နန်းအေးခိုင် မြေး ကောင်းမင်းခန့် မိသားစု
31 ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ဦးကြည်စိန် မိခင် ဒေါ်ကင် တို့အား ရည်စူး၍ ဦးသိန်းထွန်း ဒေါ်ငွေလှိုင် မိသားစု
34 နှစ်ဖက်မိဘများ အမှုထား၍ ကိုကျော်စည်သူ၊မမို့မို့အေး သမီး မခြူးသံလွင်အေး မိသားစု (USA)
35 အောင်မျိုးသူ ခိုင်ခိုင်သိန်း၊ဗညားအောင် ယင်းမာခင်၊တင်မိုးခိုင်၊နီနီထွေး၊ခင်ယုဆွေ သူငယ်ချင်းတစ်စု နှင့် အောင်ဇော်မိုး၊ ခင်မြမိုး၊ သန်းလဲ့ခိုင်၊ ဇင်မာ သူငယ်ချင်းတစ်စု
36 ဒေါ်အေးအေးလွင် မိသားစု
37 ကိုဇင်ကို+မသန္တာ မိသားစု
38 ကိုငြိမ်းချမ်းသူ+မဝင်းလဲ့လဲ့အောင် မိသားစု
39 ကိုမင်းဇော်ခိုင်၊မမြင့်စိန်၊မမြင့်ရီ၊မမို့မို့အောင်၊မမြသဲဖြူ၊မသဇင်နွယ်၊မနန်းအုန်းကြည် သူငယ်ချင်းတစ်စု ကောင်းမှု
40 ကိုကျော်ဇင်မင်း+ မခင်မျိုးမျိုးညွန့် သမီး မေနွယ်ဇင်မင်း မိသားစု
41 ကိုတင်ထွန်းတိုး+ မမော်မော်ဝင်း
43 ကိုမြင့်ဇော်+ မစိုးပပမွန်
44 ကိုညိုအောင်ခင်+ မဆွေဆွေမြင့် မိသားစု
48 ဦးဝင်းဇော်+ဒေါ်ယုယုမြိုင် သား မောင်ကောင်းမြတ် မိသားစု
49 Ko Kyaw Thet + Ma Yin Thet မိသားစု
50 ကိုသစ်လွင်ထွန်း+မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်းု
51 မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုကျော်လွင်သန့် + မသန္တာဆွေ မိသားစု
52 ကိုကျော်ကျော်အောင်+မခင်သိန်းသန်း သမီး Beatrice မိသားစု
53 နှစ်ဘက်သော မိဘနှစ်ပါးအား အမှူးထား၍ ကိုစိုးလင်းထွန်း နှင့်မသန္တာလွင် မိသားစု
54 ဦးသွန်းလှိုင်+ဒေါ်လှလှပုံ မိသားစု
55 နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုမျိုးမင်း+မကျော့ခိုင်စံ (သား) ကောင်းမင်းထက်မိသားစု
56 ဆရာလေး ဝိမေက္ခ ညဏီ
57 ကိုဇင်မင်းဦး+မရင်ရင်ထွေး မိသားစု
၂- ဆရာတော်များအတွက် ဓမ္မပူဇာ(နဝကမ္မ) အလှူရှင်များ
၁ ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီမိသားစု နဝကမ္မ
၂ မဝင်းဝင်းမြင့် နဝကမ္မ
၃ နှစ်ဖက်မိဘများ အမှုထား၍ ကိုကျော်စည်သူ၊မမို့မို့အေး သမီး မခြူးသံလွင်အေး မိသားစု (USA) နဝကမ္မ
၄ ကွယ်လွန်သူ မိဘများအား ရည်စူး၍ ကိုဖြိုးဇော်+မမေသူထက် မိသားစု နဝကမ္မ
၅ ဒေါက်တာမင်းထွဋ်+ဒေါက်တာခိုင်နွယ်ဦး မိသားစု (Jamaica) နဝကမ္မ
၆ ဒေါ်မူမူကျော် နဝကမ္မ
၇ ဒေါ်နန်းဝင်းစန္ဒာ-သမီး နန်းယွန်းသစ္စာ နဝကမ္မ
၈ နှစ်ဘက်သော မိဘနှစ်ပါးအား အမှူးထား၍ ကိုစိုးလင်းထွန်း နှင့်မသန္တာလွင် မိသားစု နဝကမ္မ
၉ ဦးသွန်းလှိုင်+ဒေါ်လှလှပုံ မိသားစု နဝကမ္မ
၁၀ နှစ်ဘက်သောမိဘများကိုရည်စူး၍ ဦး အောင် ဝင်း ဦး + ဒေါ် နွဲ့နွဲ့ ရီ မိသားစု နဝကမ္မ
၃- ဆရာတော်(၄)ပါးအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်အလှူရှင်များ (S$)
(ဖခင် ဦးထွန်းမြင့်) အားရည်စူး ၍ မိခင် ဒေါ်ရင်ရင်ရွှေ မိသားစုကောင်းမှု လေယာဉ်လက်မှတ်
ကိုသက်နိုင်ဦး + မမော်ဇင်
၄- တရားထိုင်ခန်းမများနှင့် ယောဂီများနေထိုင်ရန်အဆောင်အတွက် အလှူရှင်များ
( S$ ၃၃၀၀။ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ တရက်စာပျမ်းမျှခြင်း၊ ရေ၊ မီး အပါအဝင်)
ဆရာတော်များအဆောင် (200S$) တရားထိုင်ဓမ္မာရုံ (1200S$) အမျိုးသား ယောဂီဆောင် (500S$) အမျိုးသမီး ယောဂီဆောင် ၁ (S$350) အမျိုးသမီး ယောဂီဆောင် ၂ (S$350) အမျိုးသမီး ယောဂီဆောင် ၃ (S$350) အမျိုးသမီး ယောဂီဆောင် ၄ (S$350)
၀၈-၁၂-၂၀၁၈ မဇာနည် နှင့် သူငယ်ချင်းများ ကောင်းမှု 1) ဦးပိုင်စိုး ဒေါ်ခင်မြသန်း မိသားစု -S$200
2) မခင်လေးမွန် -S$200
3) ကိုသူရအောင်+မချောယုအောင် မိသားစု-S$200
4) မချောစုလွင် S$200
5)နှစ်ဖက်သော မိဘများကိုအမှူးထား၍ ကိုသန်းထိုက်+မသင်းယုဆွေ ၊ သား မောင်ထက်အောင်မိသားစု S$100
6) ကွယ်လွန်သူ ဖခင် ဦးကျင်သိန်း အား ရည်စူး၍ မသင်းသင်းထွေး နှင့် မောင်နှမ မိသားစု S$150
7) မိခင် ဒေါ်ခင်အေး အား အမှူးထား၍ မသင်းသင်းထွေး နှင့် မောင်နှမ မိသားစု S$150 ကိုဉာဏ်ဝင်းပိုင် + နန်းစိန်ဝါ မိသားစု မဇာနည် နှင့် သူငယ်ချင်းများ ကောင်းမှု ကိုကျော်စွာ, မသီသီအောင်, သမီးဇင် မိသားစု, မညိုမီတင်, မယဉ်မင်းချို, မရှူမဝ, မမြတ်သက်ခိုင် ကိုထင်ကျော်+ မမေသက်ဝင်း မိဘများအား အမှူးထား၍ မမြတ်နန်းအေး
ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးနှင့်အစ်မကြီး အားရည်စူး၍ Hendri + ခွာညိုသင်း ကောင်းမှု -100S$
U Swe Win and Daw Yin Yin San အားအမှူးထားပြီး သားThant Zaw Lwin +သမီး Yin Myint Swe မြေး Zheng Rong Hui မိသားစု ကောင်းမှူ ဦးဇော်ထွန်း + ဒေါ်ကြူကြူလှိုင် မိသားစု ၁. သဇင်စိုး၊သဇင်စိုး
၁၀. ငယ်လေး၊ သီတာအောင် ဦးလှမြင့်ဦး + ဒေါ်ခင်စိုး
ခင်ခင်လေး ကွယ်လွန်သူ မိခင် ဒေါ်ရှုလေ နှင့် ဘိုးဘွားများအား ရည်စူး၍ ခင်ပွန်း ဦးကျော်စိုး သား ဟန်ဝင်းထွန်း သမီး သဉ္ဇာဦး ကောင်းမှု ကိုရဲမြင့်ဦး + မသင်းသင်းမော် သမီး JING ROU
မနှင်းနှင်းယု မိသားစု U Swe Win and Daw Yin Yin San အားအမှူးထားပြီး သားThant Zaw Lwin +သမီး Yin Myint Swe မြေး Zheng Rong Hui မိသားစု ကောင်းမှူ ကိုကျော်ရဲခေါင်+ မယမမင်းထိုက် သား မောင်ဘုဏ်းပြည့်ထွဋ်ခေါင်၊ သမီး မပြည့်စုံထွဋ်ခေါင် မိသားစု
ကိုမြင့်သော်ဉာဏ်+ မဇာလီပြုံး မိသားစု ကွယ်လွန်သူ အဖွား ဒေါ်ကြည်ကြည် နှင့် ဖခင်ဦးကျော်ဆန်းမြင့် အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာယဉ်မြတ်သူ ၁။ မျိုးနီနီကျော်
၅။ အေးမြတ်သူ ၆။ ယဉ်ယဉ်မြတ် ၇။ ထိုက်သဉ္ဇာဝင်း ၈။ လှယမင်း
၉။ မျိုးဟန်စုကျော် ၁၀။ ခိုင်ကျော့ကျော့ဇင် ဦးခင်မောင်အေး+ဒေါ်ခင်ခင်မျိုး
သမီး ကြည်စင်ေ၀ မိသားစု
၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ကိုအောင်သက်လင်း+ မယဉ်ယဉ်နု မညွန့်မေ + ကိုမင်း မိသားစု ကိုကျော်ဇောလင်း+မယုသင်းချို မိသားစု $100
ဦးအုန်းကြိုင်+ဒေါ်ခင်သိန်း သမီး မဇင်မာ သား မောင်ဝေလင်း၊မောင်ထူးကျော်+မဟေမာန် မိသားစု S$100
ဒေါ်စန်းကြည် မိသားစု S$100 မိခင် ဒေါ်ရီပြုံး နှင့် သမီး အိန်သူနိုင် မိသားစု S$100
ကိုမြင့်သော်ဉာဏ်+ မဇာလီပြုံး မိသားစု ဦထွန်းခင်+ဒေါ်ခင်ကြည် သားအောင်မြင်ထွန်း သမီးခင်ဝတ်ရည်ထွန်း ခင်ဇာနည်ထွန်း မိသားစု ဦးအောင်သိန်း+ဒေါ်ကြင်လွမ် မိသားစု မောင်သက်ခိုင်ထွန်းအား ရည်စူး၍ မရီရီလှိုင်ထွန်း ကောင်းမှု
၁၂-၁၂-၂၀၁၈ နှစ်ဖက်သော မိဘနှစ်ပါး ဦးထိပ်ထားလျှက်
မိသားစု ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်ရီရီ နှင့်ဘိုးဘွာ းများအားရည်စူး၍ ကိုထွန်းနိုင်လင်း + မနွဲ့လေးရီ သားမြတ်ထက်လင်း --S$700 သူရကျော်၊ခိုင်ဇင်ကျော် မိသားစု --S$100 ဦးအောင်သိမ်း+ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦးမိသားစု--S$100 ဦးကျော်ညွန့်+ ဒေါ်တိုးရီ မိသားစု--S$100 မိဘများအားအမှူးထား၍ ကိုထွန်းထွန်း + မနီနီအောင် မိသားစု--S$200 ဦးခင်မောင်မြင့်နှင့် သမီး မခင်စန္ဒီဆွေ မိသားစု နှင့် ဦးသန်းဝင်းမိသားစု
ကိုမြင့်သော်ဉာဏ်+ မဇာလီပြုံး မိသားစု ဒေါ်မြဦး ၊ မဖြူဇာခိုင် မိသားစု ဒေါ်ကျင်ကျင်ရီ၊ ဒေါ်တင်တင်ခိုင် အောင်မျိုးသူ ခိုင်ခိုင်သိန်း၊ဗညားအောင် ယင်းမာခင်၊ တင်မိုးခိုင်၊ နီနီထွေး၊ခင်ယုဆွေ သူငယ်ချင်းတစ်စု နှင့် အောင်ဇော်မိုး၊ ခင်မြမိုး၊ သန်းလဲ့ခိုင်၊ ဇင်မာ သူငယ်ချင်းတစ်စု
၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ကိုချစ်ကိုကို+မဇာခြည်ဦး (သား) ဟိန်းထက်ဖြိုး၊ဟိန်းသန့်ညီ မိသားစု ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ဦးခင်မောင်အေး အားရည်စူး၍ မိခင် ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှင် မိသားစု မငြိမ်းဌေးစံ မွေးနေ့အလှူ နှစ်ဘက် မိဘများအား အမှူးထား/ရည်စူး၍ Capt. ဝဏ္ဏတင့်ဝေ+မမေသဉ္ဇာဟန် မိသားစု ဒေါ်ခင်ခင် မိသားစု Ngu Wa & Zin Wa ဘိုးဘွားမိဘများအား အမှူးထား၍ သမီးလေး ဝေနှင်းဖြူ ၁၀ လပြည့်မွေးနေ့အလှူ-s$100
မကျော့သူဇာနှင့် သူငယ်ချင်းတစုမှ မစုခိုင်ကျော် မွေးနေ့အလှူအဖြစ်-$50
ကိုကျော်ဇောလင်း+မယုသင်းချို မိသားစု $100
မိဘ နှစ်ပါး ကို ဦးထိပ်ထား ပြီး သမီး ခင်ပြည့် ပြည့်ထွန်း S$50 ကိုမင်းဇော်ခိုင်၊မမြင့်စိန်၊မမြင့်ရီ၊မမို့မို့အောင်၊ မမြသဲဖြူ၊ မသဇင်နွယ်၊မနန်းအုန်းကြည် သူငယ်ချင်းတစ်စု ကောင်းမှ
၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ကွယ်လွန်သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည်စူး၍ သား- မောင်အောင်ပြည့်စုံအေး
1)ဦးတိုးလွင် +ဒေါ်ကေသီခိုင် သားလွင်ကိုဦး မိသားစု မှ ဦးတိုးလွင်မွေးနေ့ အလှူ -S$300
2)ကိုအောင်ကြည်စန်း+မဌေးဌေးအောင် (သမီး) အိမ့်သီရိအောင် -S$100 3)ကိုမင်းထွဋ်ဝင်း+မချိုနှင်းအေး--S$100
4)ဦးအောင်စိန်ကီး+ ဒေါ်စောအေးမိသားစု --S$100
5)နှစ်ဖက်သောမိဘများကို ရည်စူးအမှူးထား၍ ကိုမြင့်ဌေး + မတင်ဇာနီကျော် မိသားစု ကောင်းမှု --S$150
6) မြင့်မြင့်လွင် & အေးအေးချို --S$200
7)မိဘနှစ်ပါးအားအမှူးထား၍ မယဉ်ယဉ်မွန် တို့ မောင်နှမကောင်းမှု --S$100
8)ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး ဒေါ်ကောက်ပို (၁၀)နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍ ဖခင်ကြီး ဦးကိုခွေး အား အမှူးထားကာ ဦးမြင့်ဆွေ + ဒေါ်ယဉ်ယဉ်သိန်း (သမီး) Ma Sandra Low မိသားစုကောင်းမှု့ --S$100
မိခင်ကြီးဒေါ်အောင်နုကို အမှူးပြုပြီး ဒေါ်ခင်မာရီ မောင်နှမများ (ရွှေပြည်သာ)ကောင်းမှု မိခင်ကြီးဒေါ်အောင်နုကို အမှူးပြုပြီး ဒေါ်ခင်မာရီ မောင်နှမများ (ရွှေပြည်သာ)ကောင်းမှု မချိုနွယ်စိုး-S$100
မနော်ကြည်ကြည်ဝင်း-S$250 မိဘ ဘိုးဘွားများအား အမှူးထား၍ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင် ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု လူဘုန်းသစ်
၁၅-၁၂-၂၀၁၈ ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီမိသားစု နှစ်ဘက်မိဘများကိုအမှူးထား၍ ကိုဖြိုးတင်သန်း+မနွေးယုအောင် သမီးထူးမြတ်နိုးမိသားစု ၁) Thiha Zaw & Minzary -$250 ၂) ကိုမင်းသက်ဇော်ဝင်း+မဌေးဌေးခိုင် $50 ၃)မလဲ့လဲ့ထွန်း $50 ၄)ကိုရဲကျော်ထွန်း $50 ၅)မစုဝါထွန်း. $100 ၁။ ကိုအောင်စိုးမိုး+မအေးမြတ်သီရိအောင်၊ သား ထက်အောင်ရှိုင်း သမီးလေး ခွန်းဆင့်သံသာ မိသားစု ( မအေးမြတ်သီရိအောင် မွေးနေ့အလှူ)
၇။ မဟန်နီမြင့် 1)ကိုသက်ဝင်းမောင်+မဇင်မျိုးဌေး S$50
3) အေးသဉ္ဇာ -S$100
မိခင် ဒေါ်ကျင်မြိုင်အားရည်စူး၍ မရီရီမြိုင် ကောင်းမှု S$50 ကိုလင်းဝေ၊မနန္ဒာထက် ၊ကိုအောင်ဖြိုးသန့် ၊ မမိုးသူသူဝင်း ကိုအောင်ခန့်+မဆွေတီဦး မိသားစု
၅- တရားစခန်းအတွက်ဆွမ်း၊ ဖျော်ရည်စသည်များ လှူဒါန်းကြသူများစာရင်း
မခင်စံပယ်၊ မဆွေဆွေမြင့် -550S$
နှစ်ဖက်မိဘများ အမှုထား၍ ကိုကျော်စည်သူ၊မမို့မို့အေး သမီး မခြူးသံလွင်အေး မိသားစု (USA) -550S$
NEX GLOBAL ENGINEERING မိသားစု
ဦးရဲဝင်း + ဒေါ်အေးအေးမူ မိသားစု
ဦးကျော် မြင့် + ဒေါ် ကျင်ကြုး သမီး မတင်ဇာကျော် မိသားစု
ကိုစောလွင်ဦး + မသင်းသက်သက်ဆွေ သား ဉာဏ်ဖုန်းစံ-550S$
ဒေါ်ကျင်ကျင်ရီ၊ ဒေါ်တင်တင်ခိုင် -550S$
ဦးကျော်ဇော+ဒေါ်သိင်္ဂီ မိသားစု ကေခိုင်မြင့်၊ ကြူကြူမြင့်
(စတုတ္ထနေ့) ဦးခင်မောင်ရွှေ + ဒေါ်စန်းဌေး
ဦးအောင်မိုး နှင့် သင်းသင်းလွင်မိသားစု မင်းဇာနည် နှင့်ဖြိုးစုစုမွှေးမိသားစု စိုးသူရ နှင့် မချိူဦး မိသားစု သိန်းဇော် နှင့် နန်းဆိုင်ဟွမ် မိသားစု
ကိုမျိုးမင်းသိန်း+မခင်စုစု သမီး Nicole KHIN မိသားစု
ခွန်မောင်ဗွေ + နန်းချိချိုဝင်း
မှ သမီးလေး ဆုထက်ရည် ၁၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အတွက် -S$550
2)Eric Chiang Kok Tiong & San San Yee သမီး Florence Chiang Siu Sia, Michelle Chiang Siu Mei 25th Wedding anniversary -S$550
နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှူးထား၍ ကိုထွန်းထွန်း +မနီနီအောင် သား ထွန်းအောင်နိုင်၊ကောင်းကျော်လင်း မိသားစု
ကိုစံလင်း+မနန္ဒာလင်း, သမီး ဆိုဖီယာလင်း
Eric Chiang Kok Tiong & San San Yee သမီး Florence Chiang Siu Sia, Michelle Chiang Siu Mei 25th Wedding anniversary -S$550
ဦးရောဘတ်+မပြုံး သား Chow Ming Xuan and Chow Yu Xuan မိသားစု S$550
(သတ္တမနေ့) မခင်သက်သက်ငြိမ်း တူမ မနွယ်ရည်မွန်လင်း နှင့် တူ အောင်မြင့်မြတ် ဦးအေးကျော်+ဒေါ်တင်တင်မြ သမီး ဒေါက်တာသက်ခိုင်ဇင်
နှစ်ဖက်သောမိဘများကို ရည်စူးအမှူးထား၍ ကိုမြင့်ဌေး + မတင်ဇာနီကျော် မိသားစု
ရရ နှင့် ထက်ထက်
Kachin Family ( MIT) (550S$)
၁) ကိုထွန်းမြတ်ဦး + မနေဇာလှိုင်မိသားစု
၃) ကိုကျော်ဇောလင်း+ မဖြူဖြူမိသားစု
၈) မအိလှိုင်မွန် (550S$)
၁) ကိုထွန်းမြတ်ဦး + မနေဇာလှိုင်မိသားစု ၂) မမြဝတ်ရည်မင်း ၃) ကိုကျော်ဇောလင်း+ မဖြူဖြူမိသားစု ၄) မချောစုလှိုင် ၅) မဝင်းမော်အေး ၆) မအေးဝင်းဌေး ၇) မသိမ့်ပပအေး ၈) မအိလှိုင်မွန်
ဦးလုံးစိန် + ဒေါ်ဌေးဌေးရီမိသားစု
ဦးအောင်စိန်ကီး + ဒေါ်စောအေး မိသားစု ကိုဇော်ဇော်မင်း + မဝင့်သူအေး မိသားစု ဝေဖြိုးလှိုင် , မလဲ့လဲ့မြင့်
်အဋ္ဌမကြိမ် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် ဝိပဿနာတရားစခန်း
(စင်္ကာပူ စိန် ့ဂျွန်းကျွန်း- ၂၀၁၇)
၂၀၁၇ တရားစခန်းအတွက် လှူဒါန်းကြသူများ စာရင်း
်သတ္တမကြိမ် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် ဝိပဿနာတရားစခန်း
(စင်္ကာပူ စိန် ့ဂျွန်းကျွန်း- ၂၀၁၆)
၂၀၁၆ တရားစခန်းအတွက် လှူဒါန်းကြသူများ စာရင်း
ဆဋ္ဌမကြိမ် မြစိမ်းတောင်ဆရာတော် ဝိပဿနာတရားစခန်း